बेरोजगार युवालाई खुसिको खबर : नेपाल प्रहरीले माग्यो ठूलो संख्यामा नयाँ भर्ना ! (सुचिसहित) — Motivatenews.Com
असोज १५,काठमाडौँ – प्रहरी प्रधान कार्यालयले झण्डै आठ हजार प्रहरीका लागि दरखास्ता आव्हान गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानश्रोत विभाग भर्ना छनोट महाशाखाले प्रहरी निरीक्षक १०८ जना सहायक निरीक्षक ५२४ जना र जवानमा ६ हजार २ सय ४४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ। त्यस्तै भान्सेका लागि ३२० जनाको दरखास्त आव्हान गरिएको छ।
१५ जना हजाम, सिलाई बुनाई सम्बन्धी १२ जना, कुचिकार १४ जना, मोचि ९ जना र खेलाडी ३० जनाको दरखास्त आव्हान गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षकका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका साथै सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख कार्यालयबाट दरखास्त दिन सकिने छ।
त्यस्तै जवानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका साथै सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालबाट पनि दरखास्त दिन सकिने छ। दरखास्त दिन असोज १८ गतेदेखि कार्तिक २९ गते सम्मको समय तोकिएको छ।
कहाँ कहाँबाट फारम भर्न सकिन्छ ? प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरुको लागि हेर्नुस् सुचि
प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी